SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
Hapana munhu ane pikicha yaJesu. Haana kumbotorwa pikicha kana kugadzirirwa chivezwa chinoratidza zvaaiva akaita. Asi patova nemazana emakore vanhu vachidhirowa zvavanofungidzira kuti ndizvo zvaakanga akaita.
Zvavaidhirowa izvozvo vaizviita vachitevedzera zvavaiita patsika dzavo, pachitendero chavo kana kuti zvavaiudzwa nevanhu vaitenga mapikicha acho. Asi zvavaiita zvaigona kuita kuti vanhu vapedzisire vatadza kuziva zvainge zvakaita Jesu uye dzidziso dzake.
Vamwe vaidhirowa Jesu akaita semunhu anorwara, ane bvudzi rakareba nendebvu shoma kana kuti achisiririsa. Vamwe vaimudhirowa aine chidenderedzwa chinopenya mumusoro kana kuti achiratidzika semunhu asina ushamwari. Asi ndizvo here zvaakanga akaita? Chokwadi tingachiziva sei? Chimwe chatinogona kuita, kuverenga zvinotaurwa neBhaibheri nezvake. Tikadaro, tichakwanisa kunzwisisa zvaakanga akaita.
Mashoko aya akataurwa naJesu achinyengetera paakabhabhatidzwa. (VaHebheru 10:5; Mateu 3:13-17) Muviri iwoyo wakanga wakaita sei? Pakanga papfuura makore 30, ngirozi Gabrieri payakaudza Mariya kuti: “Uchabata pamuviri, wobereka mwanakomana, . . . Mwanakomana waMwari.” (Ruka 1:31, 35) Saka Jesu akanga asina chivi sezvakanga zvakangoita Adhamu paakasikwa. (Ruka 3:38; 1 VaKorinde 15:45) Jesu anofanira kunge aiva nechimiro chakanaka uye akafanana namai vake Mariya, avo vaiva muJudha.
Jesu aichengeta ndebvu sezvaingoitwawo patsika dzechiJudha. Ndebvu dzaiita kuti munhu aremekedzwe. Dzakanga dzisina kureba uye dzaisasiyiwa dzakangoti nyangarara. Zviri pachena kuti Jesu aidimburira ndebvu dzake nebvudzi rake. VaNaziri chete, vakaita saSamsoni, ndivo vaisagera bvudzi.—Numeri 6:5; Vatongi 13:5.
Jesu aiva muvezi kwemakore akawanda, uye maturusi aaishandisa akanga akasiyana neaveko mazuva ano. (Mako 6:3) Saka anofanira kunge aiva munhu akasimba. Achangotanga ushumiri hwake “akadzingira vose vaiva nemakwai nemombe kunze kwetemberi, uye akadurura mari yevaichinja mari, akapidigura tafura dzavo.” (Johani 2:14-17) Zvaitoda munhu akasimba kuita zvinhu zvakadai. Jesu akashandisa muviri waakapiwa naMwari kuti aite zvaakanga atumwa. Akati: “Ndinofanirawo kuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari kune mamwe maguta, nokuti ndakatumirwa izvozvi.” (Ruka 4:43) Zvaitoda kuva munhu akagwinya kuti afambe muParestina yese achiparidza mashoko aya.
‘UYAI KWANDIRI, UYE NDICHAKUZORODZAI’
Chiso chaJesu chine ushamwari chinofanira kunge chakaita kuti vaya ‘vaishanda zvakaoma uye vakaremerwa’ vafarire mashoko aya. (Mateu 11:28-30) Unhu hwakanaka hwaaiva nahwo hwairatidza kuti aikwanisa kuzorodza vaya vaibvuma kudzidziswa naye. Kunyange vana chaivo vaida kuva pedyo naJesu, nekuti Bhaibheri rinoti: “Akagumbatira vana mumaoko ake.”—Mako 10:13-16.
Kunyange zvazvo Jesu akasangana nezvinhu zvinorwadza asati afa, haana kuramba achifunga zvinhu izvozvo. Semuenzaniso, pamuchato wakaitwa kuKana, akachinja mvura kuita waini zvikaita kuti vanhu vafare. (Johani 2:1-11) Pane dzimwe nguva, akadzidzisa vanhu zvidzidzo zvinokosha zvisingakanganwiki.—Mateu 9:9-13; Johani 12:1-8.
Chinonyanya kukosha ndechekuti zvaiparidzwa naJesu zvakaita kuti vanhu vave netariro yekuwana upenyu husingaperi. (Johani 11:25, 26; 17:3) Vadzidzi vake 70 pavakadzoka vachimuudza zvakaitika pavakanoparidza, Jesu “akafara kwazvo” uye akati: “Farai nokuti mazita enyu anyorwa kumatenga.”—Ruka 10:20, 21.
“IMI HAMUFANIRI KUVA VAKADARO”
Vatungamiriri vezvitendero vemunguva yaJesu vaiita zvinhu zvekuda kuonekwa nevanhu uye kuratidza simba ravo. (Numeri 15:38-40; Mateu 23:5-7) Jesu akaudza vadzidzi vake kuti ‘vasazviita madzishe’ kune vamwe. (Ruka 22:25, 26) Akatonyevera kuti: “Chenjererai vanyori vanoda kufamba-famba vakapfeka nguo refu vachida kukwaziswa mumisika.”—Mako 12:38.
Kana ari Jesu, akanga asingaiti zvinhu zvekuda kuonekwa, zvekuti pane imwe nguva vanhu vakatadza kumuziva. (Johani 7:10, 11) Kunyange paaiva nevaapostora vake 11 vakatendeka, aisamboratidza kuti akasiyana navo. Judhasi mutengesi akatoita zvekutsvoda Jesu kuti mhomho yaaiva nayo imuzive.—Mako 14:44, 45.
Saka kunyange zvazvo tisingazivi zvakawanda nezvaJesu, zviri pachena kuti akanga asina kuita sezvinofungwa nevanhu. Zvekuti akanga akaita sei hazvinyanyi kukosha. Chinokosha ndechekuziva kuti pari zvino ari kuitei.
“MUNGUVA PFUPI, NYIKA HAICHAZONDIONI”
Jesu akafa akavigwa musi waakataura mashoko iwayo. (Johani 14:19) Akapa upenyu hwake kuti huve “rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.” (Mateu 20:28) Pazuva rechitatu, Mwari akamumutsa aine muviri ‘wemweya’ uye “akamubvumira kuti aonekwe” nevamwe vadzidzi vake. (1 Petro 3:18; Mabasa 10:40) Saka paakaonekwa nevadzidzi vake, akanga akaita sei? Akanga asina kuita sezvaaimbova zvekuti kunyange vadzidzi vake vakambotadza kumuziva. Mariya Magadharini akatofunga kuti aiva mutarisiri wemunda; uye vadzidzi vake vaviri vaienda kuEmausi vakafunga kuti aiva mutorwa.—Ruka 24:13-18; Johani 20:1, 14, 15.
Parizvino Jesu ari kuitei? Jesu paakanga ava nemakore 60 afa, muapostora Johani akazarurirwa achibva amuona. Haana kuona munhu aiva pamuchinjikwa. Akaona “Mambo wemadzimambo naShe wemadzishe,” Mambo weUmambo hwaMwari. Jesu ava pedyo kuparadza madhimoni nevanhu vanovenga Mwari, uye achaita kuti vanhu vanoteerera vawane makomborero.—Zvakazarurwa 19:16; 21:3, 4.
Paakamutswa, Jesu Aiva Nemuviri Wenyama Here?
Bhaibheri rinoti Jesu ‘akaitwa mupenyu mumudzimu,’ saka sei vadzidzi vake vaikwanisa kumuona nekumubata paakamutswa?
Ngirozi yaMwari Inotumwa Nemashoko
Mariya Ane Pamuviri, Asi Haana Kuroorwa
Jesu Anoshingairira Kunamata Kwechokwadi